မင်းမကြည့်လို့မသိတာပါ – မြေဇင်း သမထဝိပဿနာ
ဒီလို ပြောသံလေး တွေ ခဏ ခဏ ကြားဖူး ခဲ့ရပါသည်… သယ်ရင်း အရင်း ခေါက်ခေါက် က မေး တာရော ဆွေမျိုး တော်စပ် သူ များက မေးတာ ရော ခံခဲ့ ရဖူး ပါတယ်… လို့… ဘာဒဲ့… အများစု မေးလေ့ရှိတာလေးတွေကတော့…
စသည်ဖြင့် အတော် များ များက ဒီလို လေးတွေ ပြောကြ လေသည်။ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ လို့မေး ကြပါသည်။#သတိ ကောင်းအောင် လုပ်ပါလို့ ပြန်ဖြေ ပေးတက် ပါသည်#ဘယ်လို လုပ်ရင်သတိ ကောင်းမလဲလို့ထပ်မေးခံရပါသည်။ ဒါနဲ့ ဆွေမျိုးတော်စပ် သူကိုတော့ ဒလိုလေးဖြေ ပေးလိုက် ပါသည် #သတိ ကောင်း ဖို့ ဆိုရင် တော့ အခြေခံ ကျကျ အသေးစိတ် က လေးက နေစ ရ ပါမယ် ဦးလေး.. နီပွန်တို့ တွေဟာ #နိုးချိန်မှ အိပ်ချိန်ထိ ပြင်ပအာရုံတွေနဲ့လုံးထွေးနေရတယ် မဟုတ် ဖူး လား..? အဲဒီ #အပြင် အာရုံတွေ နဲ့ တွေ့တဲ့အခါ မိမိစိတ်ကိုအာရုံပေါ်တည့်တည့် ထားနေတာဟာ သတိထားတာပါဘဲ..ဦးလေးရယ်…ထမင်းစားတယ် ဆိုပါစို့ဗျာ။ လူက ထမင်း စားနေတယ်။ စိတ် က တခြားနေရာရောက်နေတယ်လေ ။(အေး.. ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်.. ညည်းပြောတာမှန်လိုက် တာအေ..)မှန်တာပေါ့ သဘာဝတရားကြီးကိုး… (ဟိုသီချင်းလိုဖြစ်… ဘာဒဲ့… မင်းမ ကြည့်လို့မ သိတာပါ)လူတိုင်းအဲ့လိုပဲ ဖြစ်နေကြတာဦးလေးရဲ့သတိမထားမိကြတာ…ဒါမို့ သတိထားမိအောင် လေ့ကျင့် ခိုင်းတာ လေနော်….. ကဲ… ဆက်မယ် နော်… တွေးမိ တွေးရာ တွေးနေမယ်လေ အလုပ် ကိစ္ စတွေ စဉ်းစား နေမယ်ဆိုရင် သတိ မရှိဘူး လို့ခေါ်တာလေ…သတိမရှိလို့ အဲလို တစ်နေကုန် ဖြစ်နေ မယ်ဆိုရင် သတိ မကောင်းဘူးပေါ့…ဒိထက် သတိ ကောင်းဖို့က မိမိစိတ်ကို အပြင် အာရုံ တွေမှာ ကပ်မထားတော့ဘဲ #မိမိကိုယ်နူတ်စိတ်သုံးပါးလုံးမှာထားနိုင်ဖို့ #လေ့ကျင့်ဖို့ကို ပထမအ ဆင့်အနေနဲ့စလေ့ကျင့်ရမှာပါ.. ဘယ်လိုကျင့်ရမလဲ ဆိုရင်….#စိတ်ကိုကိုယ်မှာထားမယ်။
#ကိုယ် အမူအရာ တွေကိုယ်မှာ ပေါ်တဲ့ခံ စားမှုတွေ ပေါ်မှာ သတိထား ကြည့် ပါမယ်..ဒီအဆင့်ကို ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာမှာ မဆို သတိထားပြီးလေ့ ကျင့်ပေး နေရပါမယ်..အဲ့လို ခဏ ခဏ သတိ ကပ်ပေးရင်းနဲ့စောစောက အပြင်မှာ သတိထားတာထက် သတိ ပိုကောင်း လာပါလိမ့်မယ်။ #ပြီး တော့နှုတ်မှာသတိထားကြည့်ပါ။ #မိမိပြောတဲ့စကား တွေကိုသတိထားကြည့်ပါ။ ဘယ်လိုထားရ မှာလည်းဆိုရင်..ငါပြောလိုက်တဲ့စကားတွေဟာ.. #ကောင်းသောစကားဖြစ်ရဲ့လား #အကျိုးရှိတဲ့ စကားဟုတ်ရဲ့လား#မှန်သော စကားရောဖြစ် ရဲ့လား စသည်ဖြင့်ပေါ့ ပြောတဲ့ စကားတွေကိုသတိ ထား ကြည့် ပါ။တနည်း…#သတိနဲ့စကားပြောရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလို သတိ ထားခြင်း ဖြင့် လည်း သတိတွေသိသိသာသာကောင်းလာတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။လုံးဝ မယုံမရှိနဲ့နော်.. နီပွန် ကိုယ်တွေ့ တွေကို ပြောပြ ပေး နေတာ ပါ ဦးလေး…ဦးလေး ဒီလို စကား တွေကို စာ တွေထဲမှာ ဖတ်ဖူး လိမ့် မယ်နော်…သို့သော် ဦးလေး လိုက်ကျင့်ဖို့အထိတော့ မသိ ခဲ့ဖူးဟုတ်…နီပွန်လည်း အဲ့လို ဖြစ်ခဲ့တာ ပါ…ဒါဟာ သတိရဲ့ အစပျိုး ထောင်ခြင်း ပါ.. ဒါမို့…လုပ်ကို လုပ်ကြည့်ပါဦးလေးရယ်…ဦးလေး အ ကျိုးထူးကို ခံစားရပါလိမ့်မယ်…နောက်များ… ဒီတူမ လေး ပြောတာ…ဟုတ်လိုက်လေ.. မှန်လိုက် လေ… ဖြစ်သွားမှာနော် ..ဂယ်တော့… နီပွန်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး…။
ဆရာ သမားများ ဟောကြား သောတရားများ ဖတ်ထားသော တရားများကို ကိုယ်တိုင် လေ့ကျင့် ပြီး ပြန်ပြောပြရတာပါ ဦးလေးရယ်…နီပွန်တို့က ဖတ်ပြီး လေ့မှ မလေ့ကျင့်ခဲ့တာလေ…(သိတယ် .. လိုက် မလုပ်ဖူး) ဆိုသူ တွေပေါ့…. မလုပ်တော့ ဘာဖြစ် လဲ..မရ ဘူးပေါ့ ဦးလေးရယ်.. မရ တော့ဘာဖြစ်လဲ မငြိမ်းချမ်း ဖူးပေါ့ ကွယ်…ဒါမို့…လက်တွေ့ ပါစာဖတ်ပြီး တရား ဟောပြ နေတာ မဟုတ်ပါဘူး ဆိုတာကို ပြောပြတာပါ ဦးလေးရယ်… (စာတွေရွတ်ပြနေတယ်ထင်မှာလည်းဆိုး ) ဟုတ်တယ်လေ စာတွေကလည်း ဒလိုပဲ လမ်းညွှန်ပေးတါကြီးပဲလေနော်…ဒါမို့…. အကောင်း ဆုံး ကတော့ မိမိ စိတ်ကို မိမိ သတိ ထား နေခြင်း ပါဘဲ။ #စိတ်မှာ ဖြစ်နေ တာတွေ ကို ခဏခဏ သတိ ထားကြည့် နေရ ပါမယ်…သတိထား တဲ့စိတ်ဟာ သတိအား ကောင်းလာရုံမက အကုသိုလ် တွေ နည်းလာတာလည်း တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။တကယ် နည်းလာတာနော် ဦးလေး စမ်းကြည့်စမ်းပါ ဦးလေးရယ် ကောင်းလွန်းလို့ပါ… အကုသိုလ်တွေ အများစုက စိတ်ကနေပဲ သတိမထား မိလို့ ဝင် တာ ကများ တာပါ…သတိ ကိုသာ ထားလိုက် စမ်းပါ.. ကုသိုလ်တွေ ကြီးဖြစ်ကုန်တာ…ဒါမို့လည်း သတိဟာ ဘယ်လောက် အရေးပါ သလဲ ဆိုတာ မြတ်စွာဘုရား ရှင်ကြီး က အကြိမ် ကြိမ် တရား ဟောတဲ့အချိန်တိုင်းပြောခဲ့တာလေနော်…သတိထား သတိထား ဆိုတာလေ… အဲ့လိုနဲ့ အေးချမ်းမှု လည်း တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲလို နေရင်း ထိုင်ရင်း အလုပ်,လုပ်ရင်းနဲ့မိမိရဲ့ ကိုယ်နှုတ်စိတ်မှာ သတိ ထားနေတာဟာ သတိပဌာန် တရားကို အားထုတ်နေတာတဲ့ ဦးလေး ရဲ့.. အရင်က နီပွန်လည်း စာ ထဲပဲ သတိထားခဲ့တာ…ဖတ်ပြီး တာနဲ့ အပြင်မှာ သတိမရှိတော့ဘူး.. ။
နောက်ပြီး ဟိုနေ့က နီပွန်ပြောပြထားသလိုလေ..ဂုဏ်တော်ပွားနေတာဟာ အကျင့်ကောင်းတခုပဲ ဦးလေ…လမ်းသွားရင်း၊ ကားစီးရင်း၊ ကျူရှင်စောင့်ရင်း၊ ဘဏ်မှာ စောင့်ရင်းနှုတ်က တစ်ခုခု ရွတ် နေတဲ့ သူတွေကို ဦးလေး တွေ့ဖူး တယ်ဟုတ်…တစ်ချို့လည်း လက်ထဲမှာ အရေအတွက် မှတ်တဲ့ စက်လေးကို တစ်ချက် ချင်းနှိပ်ပြီး ရွတ်နေကြတယ်လေ….အင်း…. အဲ့ဒါ…အထင် မသေး လိုက်နဲ့ နော်… အလွန် လေးစား ကြည်ညိုဖို့ ကောင်းတာ ပါလား။ အတုယူ အားကျပြီးလိုက်လုပ်ဖို့လည်း သိပ်ကို ကောင်း တာ​နော် ။ဘာလို့လဲ သိလား…လူတွေမှာ အချိန်ပို သိပ် မရှိကြ ပါဘူးလေ ။လူအ ချို့မှာသာ အေးအေး,ဆေးဆေး တရားဘာဝနာကို အချိန်ပေးပြီး လုပ်နိူင် ကြပေမယ့်…. လူတော် တော် များများ ကတော့ ပြေးပြေး, လွှားလွှား လှုပ်ရှား နေကြ ရတာ လေ…ရိပ်သာ တွေ မဝင်နိူင်၊ ကျောင်းကန်တွေ မရောက်နိူင် ဖြစ်နေ ကြတာလေ….ကိုယ့်အိမ်က ဘုရားခန်းမှာ တောင်တစ်နာရီ အချိ န်မပေးနိူင်တဲ့သူတွေကများပါတယ်…အရင်က နီပွန်လိုပေါ့….ဒါပေမယ့် လုပ်ချင် စိတ်သာ မူ လ ပထမ ဖြစ်တာမို့ သွားရင်း, လာရင်း တရား အလုပ်ကို အားထုတ်နေကြတာဟာ အင်မတန်ကို ကောင်းတဲ့ အကျင့်ကောင်းတွေပါနော်… အချိန်ရသူဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ မရသူဘဲဖြစ်ဖြစ်မိမိစိတ်ကို တွေ့ ကရာ အာရုံတွေ နောက်မလိုက် အောင်လို့ ဘာဝနာတစ်ခုခုနဲ့ထိမ်းသိမ်း စောင့်ရှောက် နေကြတာ လေ…ကုသိုလ်လည်း ရသလို, အလုပ်လည်းပြီးပါတယ်။
အကုသိုလ် နဲသလို#သီလ သမာဓိ ပညာတွေ ဖြစ်ဖို့လည်း အထောက်အပံ့ကောင်းတွေပဲ ဦးလေး ရဲ့…(ညည်း ပြောမှ ပဲအေဂုဏ်တော်ပွားဖို့ မေ့နေ တယ်ဟ)အာ့မို့ ဦးလေးက အထင်သေး တာကိုး ဒါက သတိ ကို အစပျိုး သလို လည်းဖြစ် ကိလေသာ မဝင်အောင် တားဆီး ပေးသလို လဲဖြစ်တာ နော်..နီပွန်..ဟိုး… အရင်ကသာ..ကြိုသိခဲ့ရင်…ဒလောက်ကြီး အဆိုး လောကဓံ ဘယ်ခံ ရပါ့ မလဲ.. .လေ..မသိလို့ခံလိုက်ရတာလေနော်..ဒါမို့ ဦးလေးကို အထင် မသေးဖို့ ပြောနေ ရတာပါ..အရင်က ဦးလေး အသိပဲလေ…နီပွန် နှာခေါင်း ရှုံ့ခဲ့တာလေ… ဟွန့် .. အရွတ် က အသားမှမဟုတ်တာ ဆို ပြီးလေ…အား..လား…လား… ခုမှ သိလာရတာ ဒါတွေဟာ… အထောက်အပံ့ ကောင်းတွေဆိုတာ. ..သူတို့ကို ရွတ်နေတဲ့ အချိန် စိတ်က အကုသိုလ် ဖြစ်ခွင့် မပေးတော့ အကြမ်းစား နည်းနဲ့ ကိလေ သာပယ် နေတာလေ ဦးလေးရဲ့…အဲ့ကနေမှ တဆင့် မိမိရဲ့ စိတ်စွမ်း ရည်တွေ မြင့်တက်လာတာပါ လား… အမျိုးမျိုး အဖုံဖုံ ဆွဲဆောင်နေတဲ့ ပြင်ပအာရုံတွေကို မတုန်မလှုပ် ရှောင်လွှဲ နိူင်လာ တယ် …ကိုယ့်အိမ်ထဲ ကိုယ်နေတဲ့ သူတွေထက် အပြင်လောကမှာ သွားလာ နေသူတွေက အပြင် အာရုံ တွေရဲ့ အတိုက် အခိုက်ကို ပြင်းပြင်း ထန်ထန် ကြုံတွေ့ရ တာလေနော် ။အာရုံမျိုးစုံကြားမှာ ကိုယ့် စိတ်ကို ထိန်းနေသူဟာ သူထိန်းနိူင်တဲ့ စိတ်စွမ်း ရည်ကပဲ အပါယ် ငရဲကလွတ်အောင် စွမ်းဆောင် ပေး​နေ တာတဲ့ ။ ဒါမို့…သီလ သမာဓိ ပညာတွေ တိုး တက်အောင် သွားရင်း လာရင်း နဲ့ ဂုဏ်တော် ပွား နေခိုင်း တာ ပါ ဦးလေးရယ်…ဒါ လည်း သတိ မရှိရင် ပွားဖို့ မေ့နေ တယ်နော်…ကဲ.. သတိ က ဘယ် လောက်အရေးကြီးလိုက်သလဲ..ဒါသည်ပင်လျှင် သတိ အရေးပါပုံ အတော်သဘော ပေါက် လောက်ရောပေါ့ ဦးလေးရေ…။
(မနေ့က စာတို လေး လက်ခံ ရရှိ ခဲ့ ပါသည်။ ငါ့ တူမလေး ရေ အလုပ် ထဲမှာ သတိ ထားပြီး ဂုဏ် တော်ပွား ဖြစ်တယ် ကျေးဇူး အရမ်းတင်တယ် စိတ်ကလေး အေးချမ်း တာခံစားရတယ်) တဲ့… ..ဟူးး…. . တော်ပါ သေးရဲ့ ပြောရကျိုး လေးနပ် လေပြီ .. အချိန်ပေးရ ကျိုးလေးနပ်လေပြီ ..ထို့သို့ ဦးလေး ဖြစ်သူအား ပြောပြ မိခဲ့ လေသည်။ အထက်က အကြောင်း အရာကို ပြန် ပြောရ လျှင်ဖြင့်…အကယ်၍ မိမိ မှာ သတိ အားနည်း နေလျှင် လိုရာခရီး မရောက်နိုင် ပါဘူး ဆိုတာ ပါပဲ ရှင်…(ဒါကိုလည်း စာရေးသူ၏ ဆရာသမားက ထောက်ပြခဲ့ပေသည် ဤစာနှင့်အတူ ဦးတင်ပါ၏ ဘုရား) စကားချပ်။ ။ဆရာသမားပြောသည်က…ငါ့တပည့်က သတိနဲနေတာကိုးသတိ မရှိ တာကိုး..တဲ့.ထိုသို့ ပြောခံ လိုက်ရသည့် နေ့မှစ၍ သတိ မလွတ် ရဲတော့ ပါ။ သတိ အရေး ပါပုံကို စာရေး သူက ရိပ်သာ ဝင်ပြီးတော့ မှ သေသေ ချာချာ သိလာရ တာပါ..သတိကလေး ဆံချည်မျှင် တထောက် စာလောက် လစ်တာ နဲ့ သေပါရောလား… ဆိုတာ.. ထင်ထင်ရှားရှား သိရှိပြီး လိုက်တဲ့ နောက်ပိုင်း တွေ မှာ ထိုင်နေ စဥ်မှာ သာ သတိရှိနေ တာ မဟုတ် အပေါ်က ပြောပြ ခဲ့သလို နေစဥ် အချိန်တွေမှာပါ…သတိက ကပ်ပါသွား ခဲ့ရပါတယ်..ဒါမို့…သိပြီး မကျင့်နိုင်တာဟာလဲ.. သတိ မရှိ လို့ပါ..ကျင့်ပြီး လမ်း မတွေ့ တာ လည်း…သတိ မရှိ လို့ပါ…အို…. လောကကြီး…ဘယ် အရာ မဆို လောကီ လောကုတ္တာ ၂ဖြာ စလုံး သတိမပါ လို့…(လိုရာမရောက်) ဖြစ်နေကြ တာပါလားဆိုတာ.. ခုနောက်ပိုင်းတွေ ကြာလေ ပိုသိကြာလေ ပိုသိလေဖြစ်လာပါတော့သည်။#သတိရ၍#ရေးမိပါ၏